FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Other Problems » FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem]
1 FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 31st May 2010, 9:07 am
FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် ?? what is it
2 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 31st May 2010, 9:14 am
ဘာကိုမေးချင်တာလဲ မသိတော့ ဘယ်လိုဖြေ ရမလဲ မသိဘူးဖြစ်နေတယ် မေးခွန်ကို သေချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မေးပါလာ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ နော်
3 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 22nd July 2010, 10:31 pm
တညျနရော : နှလုံးသားကျောက်ချတဲ့နေရာ
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-07-14
ကျွန်တောသိတဲ့ FRM Pro ကတော့ JXD Mp4 အများစုကို Firmware ရေးတဲ့ Softwareလို့သိထားပါတယ်။အခုတော့အဆင့်သင့်လိုက်လေဗျာ ကျွန်တော်လည်းအဲဒါကိုသိချင်နေတာကြာပြီ။သူမေးထားတာလဲအဲဒါဖြစ်မှာပါ ဘယ်လိုမျိုးသုံးရတယ်ဆိုတာကိုသေသေချာချာလေးသိတဲ့လူများရှိရင်ဝေမျှပေးကြပါအုံးဗျာ
4 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 31st July 2010, 12:26 pm
ဘယ်သူမှလည်း ဖက်လုပ်ကြ၀ူး စိတ်ညစ်တယ် စိတ်ညစ်တယ်
ဆွေးနွေးကြပါအုံး ညီ/ကို တို့ရေ
5 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 31st July 2010, 10:08 pm
အဖက်မလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း မသိကြလို့ပါ။
ပြီးတော့ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးက စောင့်နေစရာတောင် မလိုပါဘူးဗျာ ၊ ကိုယ်တိုင် Google လုပ်လိုက်ရင်တောင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Search Engine ကြီးတစ်ခုလုံး အလကားရထားတာ ကောင်းကောင်းအသုံးချကြည့်လိုက်ပါ။ =)
What is FRM Pro? FRM Pro? အဲလိုရိုက်လိုက်။ လိုမယ်မလိုဘူးထင်တာလေး စစ်ပြီးတော့ ဖတ်ကြည့်ရင်တောင်ရပါတယ်။
About FRM Pro
FRM Pro isasoftware for Windows created by Sunplus mMedia Inc., intended for compatible devices with SPMP8000 chip by Sunplus. Using this software, user can upload new firmware or updated firmware into their devices. This could be used to fix numurous problems, for example memory corrupted problem that disable writing.
6 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 1st August 2010, 4:48 pm
FRM Pro ဘာလဲဆိုတာတော့သိထားပါတယ် သူ Software Version
ဒါပင်မယ့်ဘာတွေက ဘာအတွက်သူကို ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာတွေကိုသိချင်တာပါ
ပြီးတော့ သူတစ်ခုထဲနဲ့ မပြီးပါဘူး သူမှာ Firmware+Binary+Software တွေ့နဲ့ဆိုတာကျွန်တော်
ခေါင်းရှုတ်နေပါတယ်။ FRM Pro က ရှိတယ်ပြီးတော့ ရေးမယ်လုပ်တော့ Resource+Binary က
မရှိဝူး ကျွန်တော်အပျင်းမကြီးပါဘူး Google မှာလည်းလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါတယ်။ ဒါပင်မယ့်ဲJXD Series , Firmware Tools, သူကိုရေးမယ့် Software တွေ့နဲ့ရှုတ်ရှက်ခက်နေပါတယ်။
ပြီးတော့ သူရဲ့ Main Website တွေ, သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Forum တွေ စုံနေအောင်ရောက်ပါတယ်
ဒါပင်မယ့် ဒါတွေကိုနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ သူရဲ့ Main Website မှာကျတော့ တရုတ်ကြီး
က ဘာမှအလားကားမပေးပါဘူး။ အလားကေားပေးတော့ သူပေးချင်တာတွေလျှောက်ပေးထားပါတယ်
အသုံးမတည့်တဲ့ပုံတွေ သီချင်းတွေစုံနေအောင်ပါဘဲ ပြီးတော့တကယ်ပြင်တက်ချင်ရင် သူထုတ်ထားတဲ့
ီDVD 16 ချပ်ကိုဝယ်ပါတဲ့။ကဲမှတ်ကရော အမှန်တကယ်တော့ဒီ post ကိုကျွန်တော်တင်
ဖ်ို့လုပ်နေတာပါ ဒါပင်မယ့်အပေါ်ကတစ်ယောက်တင်ထားတော့ ကျွန်တော်ပါသိချင်တဲ့ အကြောင်အရာကို ၀င်ဆွေးနွေးကြည့်တာပါ။ တကယ်တော့ ဒါကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိတဲံ့
နောင်တော်များရှိရင် ၀င်ဆွေးနွေးကြပါအုံးလို့ ကျွန်တော်အတွက်ကြောင့်နဲ့သူများတွေရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုမဖြုန်းချင်ပါဘူးဗျာ
အော်ပြောရအုံးမယ် Software ရေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ ပလာဇာမှာ အဲဒီ FRM Pro နဲ့ ကျန်ရှိသော Software ရေးနည်းနဲ့ Data+အသင်ကို
သုံးသိန်းခွဲဆိုတော့ ကျွန်တော့ပြန်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ ဟဲဟဲ ကိုယ့်အကြောင်းကို ဘယ်သူမှာပြောချင်ပါဝူး ခုမှာ လူစုံတုန်းရှင်းပြမလို့ပါ ဟဲဟဲ
7 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 1st August 2010, 9:55 pm
အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုကူညီရမယ်မသိဘူးရယ်...
ပြီးတော့ Myanmar Forum တွေမှာလည်း ၊ ဒါမျိုးတတ်တဲ့သူ ရှားမယ်ထင်တာဘဲ... ရှိချင်မှတောင်ရှိမှာ။ အဲဒီ့တော့ ခြေဆန့်တတ်သူဆို ၊ English Forum တွေထိသွားကြည့်ပေါ့... ဒါမှ မဟုတ် Google မှာ ခုနက အလကားမပေးတာတွေကို အလကားရလိုရငြားထပ်ရှာကြည့်လေ။ =)
တစ်ခုလောက် မသိလို့ပြန်မေးမယ်နော်.. အဲဒါက ဘာလုပ်လို့ရလဲဟင်...
အဲဒါရေးနည်းကတောင် ၃ သိန်းခွဲဆိုလို့ပါ.. ရိုးရိုး MP3, MP4 Player တွေက နောင်တစ်ချိန် ခေတ်ရှိပါဦးမလား....
အခုခေတ်မှာ Objective-C သင်။ ဒါမှဟုတ် Java သင်ပြီးတော့ Mobile Apps တွေရေးမယ်ဆိုရင်တောင် ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကော ၊ ဘာကောပိုသာမယ်ထင်တာဘဲ။ ပြီးတော့ သင်တန်းကြေးလည်း အဲလောက်မကျဘူး။ ကိုယ်တိုင် စာအုပ်နဲ့လေ့လာလို့ရတယ်။
အဲလောက်ဈေးကြီးတာ သူ့အကြောင်းနဲ့သူတော့ ရှိမှာပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့်ပြန်မေးကြည့်တာပါ...
8 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 2nd August 2010, 10:03 pm
ဟုတ်ပါတယ် သူတို့ကလည်းတော်ရုံတန်ရုံလွယ်လွယ်နဲ့မရပါဘူး။ ပလာဇာမှာတော့ တော်တော်လေအလုပ်ဖြစ်နေကြတယ်။ သူနေရာ နဲ့ သူကိုဗျာ
အော်ဒါနဲ့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Mobile Apps ကိုလေ့လာချင်ပါတယ် စာအုပ်ရှိရင်ဝေမျှပေးပါလား
9 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 3rd August 2010, 2:47 pm
ayoe88 wrote: အော်ဒါနဲ့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Mobile Apps ကိုလေ့လာချင်ပါတယ် စာအုပ်ရှိရင်ဝေမျှပေးပါလား
ဒါဆို..ကျွန်တော်တို့ အတူတူလေ့လာလို့ ရတာပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း Mobile Apps ကိုလေ့လာဖို့ ပြင်နေပါတယ်။ ကျောင်းစာမေးပွဲပြီးရင် စလေ့လာတော့မှာ။
10 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 4th August 2010, 12:13 pm
ပလာဇာမှာ အလုပ်ဖြစ်တာ ၊ ရင်းရတာနဲ့ ဘယ်ကာမိမလဲ။ ၃ သိန်း နဲ့ ပြန်ရမှာနဲ့ဆိုရင်.... ၀န်ထမ်းဆိုရင်ပြောပါတယ်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ ဒီမှာက ရိုက်စားလုပ်လို့ရတယ်။ (“ခဲကြွပြီး ခလုတ်တွေကြောင်သွားရင် အနည်းဆုံး ၅၀၀၀ တောင်းတယ်။ အိမ်မှာပြင်လိုက်ရင် ၅ မိနစ်ဘဲကြာတယ်။”)
Mobile ဘက်လိုက်ချင်တာ ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်။ အခြေခံကနေ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်မယ်ဆို ဒီမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းက ရှိပြီးသားပါ... (တော်အောင်သာကြိုးစား သူဌေးလေး မောင်ပြုံး ရှိတယ်။)
Android အတွက်ဆို Java ကို Basic က စလိုက်။ Problem Solving Skill ကို ကောင်းအောင်လုပ်...
ကို ထက်နိုင် နဲ့ တူတူတွဲလေ့လာပေါ့.. စာအုပ်ကတော့ ဘယ်ဟာကောင်းလဲမညွှန်းတတ်ဘူးရယ်...
အစ်ကိုသွားမယ့် Platform လည်းရှိသေးတာကို...
11 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 4th August 2010, 11:09 pm
12 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 4th August 2010, 11:11 pm
$ƴǩǾ wrote: @ကို အရိုး
သူဌေးလေးမောင်ပြုံးက ဘယ်သူလဲညီလေးရေ မိတ်ဆက်ပေးပါအုံး
ဒါနဲ့ ညီလေးသိသလောက် သူ Platform အကြောင်းလေးနဲနဲလောက်ပြောပါအုံး.....
13 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem] on 4th August 2010, 11:38 pm
Mobile Platform တွေက အမျိုးမျိုးရှိတယ်လေ... အစ်ကို သွားချင်တဲ့ဆီသာသွား. Multi-platform သွားနိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်
14 Re: FRM PRO ကဘာလဲ ဟင် [Problem]